युरोप भ्रमणबाट पूरा गरी आज बिहान ९.४० मा स्वदेश फर्कदै प्रधानमन्त्री ओली « Janata Times
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्कनु हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओली आज बिहान ९. ४० बजे त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा अवतरण गर्नुहुने उहाँका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जनटाटाइम्सलाई जानकारी दिनुभयो ।
गत जेठ २५ गते स्वीटजरल्याण्डको जेनेभातर्फ जानुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतबार्षिकी समारोहमा सम्बोधन गरी बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
बेलायतबाट सार्वजनिक रेल चढेर फ्रान्स पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सकमक्षीसँग भेटबार्ता गर्नुका साथै बेलायती लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको सुनौलो अवसर रहेको तथ्य राख्नुभयो । फ्रान्सबाट जेनेभा फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली हिजो स्वदेश फर्कनुभएको छ ।
उहाँ आज बिहान ९.४० बजे अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा अवतरण गर्ने प्रेस संयोजक अधिकारीले बताउनु भयो । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री जेनेभाबाट स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ, कतारको दोहाहुँदै आज बिहान ९ . ४० मा काठमाडौं आइपुग्नुहुनेछ,’ प्रेस संयोजक अधिकारीले जनटाटाइम्ससँग भन्नुभयो ।